महराले बयान दिन किन गर्दैछन्,आनाकानी ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
महराले बयान दिन किन गर्दैछन्,आनाकानी ?
जवरजस्तीकरणीको आरोपमा समातिएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले बयान दिन आनाकानी गरेका छन् । स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै महराले आनाकानी गरेका हु्न् । महरा उपचाररत नर्भिक अस्पतालले पनि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बयान लिन नमिल्ने चिठी प्रहरीलाई पठाएको छ ।
महराको शरीरमा सुगरको मात्रा, अनिद्रा र तनाव बढेको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ । उनलाई प्रहरीले प्रारम्भिक सोधपुछ गरेपनि सरकारी वकिलको उपस्थितिमा थप बयान लिन समस्या भएको हो । असोज १९ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका महरा २३ गतेदेखि अस्पतालमा छन् । अदालतले पहिलो पटक दिएको म्याद शुक्रबार सकिंदै छ । अनुसन्धान नसकिए प्रहरीले म्याद थपका लागि महरालाई आइतबार पुनः जिल्ला अदालत काठमाडौं लैजानेछ ।